COD SIR AH: M/weynaha Soomaaliya miyuu is sharaxayaa 2 sanno ka dib? Muxuuse hadda ka shaqeynayaa? – Puntlandtimes
COD SIR AH: M/weynaha Soomaaliya miyuu is sharaxayaa 2 sanno ka dib? Muxuuse hadda ka shaqeynayaa?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cod laga duubay una muuqday mid loo duubay si qarsoodi ah, wuxuu kaga hadlayaa mucaaradnimada faraha badan ee lagu hayo dawladdiisa iyo damaciisa ku wajahan doorashooyinka la qorsheynayo sannadka 2021-ka horaantiisa in ay ka dhacaan Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay in uusan marnaba is sharaxeyn oo uu xilka ka dagayo, marka ay dhamaato mudada afarta sanno ah oo ay hadda uga harsan yihiin sannad iyo bar in ka badan, wuxuuna xooga saarayaa in uu doonayo in wax laga bedelo hab fikirka siyaasiga ah.
Madaxweynaha ayaa sheegaya in uu isku arko Nabadoon, iyo in uu yahay kii Soomaalida ka saari lahaa marxaladdaha qalafsan ee ay ku jirto, wuxuu codsanayaa codka inta uu socdo in lalayimaado wada hadal iyo tanaasul lana shaqeeyo.
Hadalka Madaxweynaha ayaa waxaa ka dhex muuqda in uu ugu baaqayo cid kasta oo mucaaradsan in dalka la dhiso, lagana shaqeeyo sidii Kursiga ay berrito ula wareegi laheeyn.